Ny fomba hananganana ankizy tsara
Poster 12.07.2018 12.07.2018 fiofanana, reny
Manonofy isika fa hitombo ny ankizy mahomby, mahaleotena ary mamorona. Izy rehetra mba hahafahan'izy ireo hiaina fiainana feno, azo antoka ary mahaliana. Adinontsika anefa ve ny toetra iray manan-danja, nefa tsy sarotra ny ho sambatra?
Izany no hatsaram-panahy. Tsy mahatonga antsika ho matanjaka izany Manan-kery izany, fa mameno ny fiainantsika amin'ny heviny. Amin'ny farany, ny maha-olombelona sy ny fangorahana azy dia zavatra tsy maintsy miankina amin'ny ray aman-dreny eo amin'ny fanabeazana azy.
Ahoana no hananana olona tsara?
Ny hatsaram-panahy dia mamaritra ny fomba fijerintsika an'izao tontolo izao, noho izany dia tsy azo atao ny mitombo ny ankizy tsara ary tsy miova amin'ny fotoana iray ihany. Rehefa mangataka zavatra avy amin'ilay zaza isika ary tsy miorina amin'ny ohatra asehontsika, dia mampianatra manipika sy mamitaka isika. Noho izany, ny fampiharana no fomba tsara indrindra hanehoana hatsaram-panahy amin'ny ankizy.
Manangana fifandraisana mahatoky amin'ny zanakao.
Aoka ho ohatra ho azy ianao.
Ampio ny hafa ary ampandraiso ilay zaza.
Mamakia boky tsara ary mijery sarimiaina tsara.
Ampianaro mba ho velom-pankasitrahana.
Mianara mijery tsara an'izao tontolo izao.
Ampianaro ny zanakao ho tompon'andraikitra amin'ny zavatra ataony.
Hajao ny toetran'ny zanakao. Ary manàna fangorahana ny zanakao.
Ampio ilay ankizy hianatra hahafantatra ny fihetseham-pony. Aza mitsara fihetsem-po ratsy, fa ampio izy ireo mba ho tafavoaka velona.
Ampio ilay ankizy hijery an'izao tontolo izao tsy misy fitongilanana sy fitsaratsaram-poana.
← Pies amin'ny kefir (amin'ny ovy sy ny atiny)
Ny famitahana dia mampiharihary ny fanahy sy ny vatana →